ကလေး Kebi2| အပိုင်းသစ်! အ | Spookiz | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
► Discover အဆိုပါ Spookiz အကွာအဝေး: https: //teespring.com/stores/spookizw ...
►ပိုပြီး Spookiz စောင့်ကြည့်ဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ http:? //www.youtube.com/watch v = -roWI ...
►စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရာသီ အပိုင်း ၃ ပိုင်း: https: //www.youtube.com/playlist? list ...
Sp Spookiz Cookie Watch: https: //www.youtube.com/playlist? list ...
Season Season 1 Episode များကြည့်ရန်: https: // www.youtube.com/watch?v=y1Mfx ...
►စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲများ: https:? //www.youtube.com/watch v = 7xlqB ...
Spookiz 스푸키즈ဘဝတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းသော Keyring ကာတွန်းဖြစ်ပါသည် ကျောင်းမှာနေစဉ် Cula, Frankie နှင့်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများအားလုံး
Cula သည်တော်ဝင် Dracula မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူသည်သွေးအေးအေးနှင့်ဆိုးသွမ်းပုံပေါ်သည်၊ သို့သော်သူသည်အခြားသူများနှင့်နီးစပ်။ သူတို့၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်လိုသည်။ သူ့မှာ OCD ရှိပြီးပြီးပြည့်စုံသပ်ရပ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့သူရှိတယ်။ မင်းသူနဲ့သူ့ဘေးနားက KongKong မကောင်းတာကိုမင်းမြင်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတကယ့်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူပါ။
Frankie သည်ခပ်ဖြည်းဖြည်းအသံထွက်သည်၊ Frankie ၏အစာစားချင်စိတ်သည်တစ်ခါတစ်ရံသူ့ကိုနဂါးတစ်ကောင်လိုဖြစ်သွားစေသည်။ သူသည်ကံကောင်းစေသောကျက်သရေရှိသောအရွက်လေးရွက် clover ကိုသူ၏ခေါင်းထိပ်တွင်ပေါက်သည်။ သူသည် Spookiz ဂိုဏ်း၏အနူးညံ့ဆုံးသောအဖွဲ့ဝင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူ၏အစာစားချင်စိတ်သည်မပြည့်ဝပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
Kebi သည်လွတ်လပ်သောစိတ် ၀ င်စားသောသူဖြစ်ပြီးစည်းမျဉ်းများနှင့်ပုံစံများကိုလိုက်နာလိုသူမဟုတ်ပါ။ သူသည်အမြဲတစေအားအင်ပြည့်ဝပြီးပူဖောင်းများနှင့် Cula ကိုတတ်နိုင်သမျှလှောင်ပြောင်ရန်နှစ်သက်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဖော်ရွေသောပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
KongKong သည် Cula ၏အဖော်ဖြစ်ပြီး KongKong ကိုအားနည်းသူမှအားကြီးသူနှင့်အားနည်းသူအားအားအကောင်းဆုံးဟုဖော်ပြသည်။ သူသည်သူ၏အရပ်အမြင့်ကိုအလွန်သတိရှိသော်လည်း Cula ကိုယုံကြည်။ နားထောင်ခြင်းဖြင့်သူသည်လုံခြုံပြီးသက်သာလာသည်။
Zizi ရှိုးပွဲများသည်အနံ့အသက်ဆိုးများပေးသော်လည်းသူမသည်သတိမထားမိပေ။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (အဓိကအားဖြင့်သူမ ဦး ခေါင်း) သည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှမကြာခဏကွဲထွက်သွားလေ့ရှိသော်လည်းသူမကိုအမြဲလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ထားလေ့ရှိသည်။ သူမမှာ Cula ကိုလျို့ဝှက်ထားသော crush ရှိပြီးသူနှင့်အမြဲအတူရှိနေရန်အိပ်မက်မက်သည်။ သူမသည်သူ့ပတ်ပတ်လည်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှက်ကြောက်နေပြီးဒါကိုမည်သူမှမသိစေလိုပါ။
Facebook သို့သွားပါ။ http://www.facebook.com/spookizworld
Our ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter သို့သွား ပါ။
Spookiz: ရုပ်ရှင် | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ | တရားဝင် Full Movie
Blade ရအောင်။ အ | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
ကာတွန်း | Spookiz 45 မိနစ်စုစည်းမှု | ကလေးများအတွက်ရယ်စရာဗွီဒီယိုများ၊ ကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုများ
Om Nom ပုံပြင်များ | COKKING အချိန် | ကြိုးဖြတ်: ဗီဒီယိုဘလော့ | WildBrain ပေါ်တူဂီ
Paw ကင်းလှည့်ကာတွန်းများဟုနာမည်ပေးထားသော | အပိုင်း ၁၀: ခွေးများကိုကယ်ပါ၊ ၂၀၂၁ ကလေးများကာတွန်းများ
Spookiz | မျက်လုံးသစ် | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ | တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်
Spookiz | Freeze ရအောင် ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ | တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်
KongKong ၏အလှပြင်ဆိုင် - Spookiz | WildBrain
Kebi ကပီကေထောင်ချောက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသူတို့ထွက်သွားနိုင်လား။ အ | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများကာတွန်းများ
Paw ကင်းလှည့်ကာတွန်းများဟုနာမည်ပေးထားသော | အပိုင်း ၁၂: ခွေးများကိုကယ်ပါ၊ ၂၀၂၁ ကလေးများကာတွန်းများ
Kebi သည်ဖျားနာ Cula ကိုကြည့်နေသည် Spookiz | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
Kebi နှင့် Cula တိုက်ပွဲ အ | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
Cula ပေါ်တွင်လက်စားချေခြင်း Spookiz | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
ရယ်စရာကာတွန်းကား | Spookiz Cula ကျောင်းမှကြောက်စရာ Wizard | ကလေးများအတွက်ကာတွန်း
Paw ကင်းလှည့်ကာတွန်းများဟုနာမည်ပေးထားသော | အပိုင်း ၁၁: ခွေးများကိုကယ်ပါ၊ ၂၀၂၁ ကလေးများကာတွန်းများ
Spookiz | ပဟေိကိုဖြေရှင်းပါ - Rubik's Cube | 스푸키즈 | ရယ်စရာကာတွန်း | ကလေးများကာတွန်းများ | ကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုများ
တံခါးနောက်မှာဘာရှိလဲ။ အ | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများအတွက်ရယ်စရာကာတွန်းများ
Kebi ခေါင်းပေါ်တွင်အဖုအထစ် | Spookiz | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
KongKong ၏အလှပြင်ဆိုင် | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
LARVA - အခက်အခဲဖန်ဆင်းရှင် | ကာတွန်းများ | ကာတွန်း | ပိုးလောင်းကာတွန်း | မီနီကာတွန်းရုပ်ရှင် | LARVA အရာရှိ